Nepal Deep | खुल्यो डीभीको आवेदन,कसरि र कहिले सम्म भर्न पाइन्छ ?
खुल्यो डीभीको आवेदन,कसरि र कहिले सम्म भर्न पाइन्छ ?
काठमाडौं। अमेरिकी इलेक्ट्रोनिक्स डाइभर्सिटी भिसा (डिभी)को आवेदन खुलेको छ। काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासले जानकारी गराए अनुसार बुधबार नेपाली समयअनुसार राती ९:४५ बजे (अक्टोबर ६, २०२१ ) बाट आवेदन खुला भएको हो।
डिभीका लागि छानिँदैमा कसैले भिसा भिसा पाउने भन्ने हुँदैन। भिसाका लागि अन्तर्वार्ता दिने मौका पाइयो भने कन्सुलर अफिसरले आवश्यक योग्यता छ वा छैन र अमेरिकी आप्रवासी कानुनबमोजिम डिभीका लागि आवेदक योग्य छ कि छैन भन्ने कुराको निर्क्‍यौल गर्नेछन्। ५५ हजार विदेशीलाई भिसाका लागि छनोट गरिने बताइएको छ।